Shiinaha Thrust Ball saarayaasha saarayaasha iyo shirkado | LGGB
Wareegyada kubbadda loo riixo waxaa loo soo saaraa sidii jihada keliya ama jihada kubbadda jihada labalaabka jihada. Iyaga waxaa loogu talagalay inay meel dhigaan culeyska foorarsiga oo keliya waana in aan lagu xirin wax shucaac radial ah.
Wareegyada kubbadda riixda waa la kala saari karaa, mashiinka usheeda dhexe, dhaqeyaasha (yaasha) guryaha, iskuxirka kubbadaha iyo qafisyada si gooni ah ayaa loo dhejin karaa. Maydhayaasha wiishku waxay leeyihiin ceel dhulka ah si ay awood ugu yeeshaan faragelinta. Boorsada weelka lagu dhaqo waa la rogay oo had iyo jeer ka weyn ceelka mashiinka usheeda dhexe.
Jihada kaliya ee riixida kubadaha: waxay ka kooban tahay laba maydhasho oo leh wadiiqooyin iyo kubbado hagaya qafis. Maydhayaashu waxay leeyihiin dusha sare ee fadhiga, waana sababtaas awgeed waa in la taageeraa si dhammaan kubbadaha si siman loogu rakibo. Waxyaalladu waxay xambaaraan culeyska foosha oo keliya hal jiho. Ma awoodaan inay qaadaan xoogag shucaac ah.
Jihada laba geesoodka riixida kubbadda: waxaad haysataa laba qafis oo leh kubbado inta udhaxeysa mashiinka dhejiska iyo laba mashiin oo dabool leh oo leh sagxado sagxad siman. Dhaqe usheeda dhexe waxay leedahay wadiiqooyin ay ku tartamaan labada dhinac waxayna kuxiran yihiin joornaalka. Dhalitaanku wuxuu qaadi karaa oo keliya xoogagga xarkaha labada jiho.
Hore: Haysashada Siidaynta Lidka